Monday December 30, 2019 - 15:16:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya ayay ku sheegtay in ay hayso macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan ciddii ka dambaysay weerarii dadka shacabka badan ku dhinteen ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sirdoonka dowladda ee Nabad sugidda loo yaqaan ayaa sheegay in dowlad shisheeye ay soo maleegtay qaraxii Ex.Control Afgooye oo ay ku dhinteen 78 qof oo ubadnaa dad Shacab ah.
"Waxaan madaxda qaranka ugudbinay, warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in Xasuuqii Shacabka Soomaaliyeed loogu gaystay Muqdisho, 28-Dec-2019, uu qorshayntiisa lahaa Dal shisheeye" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda Federaalka.
Ilo wareedyo kale oo ay baahisay warbaahinta Turkiga ayaa qaraxii Muqdisho ka dhacay si toos ah ugu eedaynaya dowladda Imaaraatka Carabta gaar ahaan Max'med Bin Zayed oo ah dhaxal sugaha UAE.
"Baariitaanka socda si loo dhamaystiro, waxaan la kaashan doonnaa Hay'adaha sirdoonka Caalamka qaarkiis." ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay sirdoonka dowladda Federaalka balse lama carrab dhabin magaca dowladda.
Qaraxii Ex.Conrol Afgooye ayaa ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa ee sanaddan 2019 ka dhaca magaalada Muqdisho wuxuuna qaraxaas gallaaftay nolosha dad ubadnaa Arday wax ka baranayay Jaamacadaha Muqdisho iyo sidoo kale ciidamo dowladda katirsan iyo 2 muwaadin oo udhashay dalka Turkiga.